भिडियो | KTM Khabar
एजेन्सी । बलिउडका किङ खान शाहरुखको फिल्म ‘जीरो’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । अभिनेता शाहरुखले आफ्नो फ्यानहरुलाई मुस्लिमहरुको महान पर्व ईदको शुभकामना दिदै टिजर रिलिज गरेका हुन् । किङ खानले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘आनन्द एल रायको तर्फबाट ईदको मिठा निकै तेज छ । साथै मेरो र मेरो ‘जीरो’ टिमको तर्फबाट ईदको शुभकामना ।’ शाहरुख खानको भुमिकाको नाम बउआ सिंह रहेको छ । टिजरमा शाहरुखले अभिनेत्री कट्रिना कैफको तस्वीर छापिएको टि ...
विद्यालयलाई एक द्वार प्रणालीबाट नियमन र व्यवस्थापन गरिनु पर्छः प्याब्सन अध्यक्ष विजय सम्वाहाम्फे
केटिएम खबरको विशेष सम्वादमा कुराकानी गर्दै निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष विजय सम्वाहाम्फे ।
केटिएम खबरको विशेष सम्वादमा विट्स एकेडेमी तथा समसामयिक शिक्षा केन्द्रित कुराकानी गर्दै विट्स एकेडेमी उच्च मा.वी.का संस्थापक प्रिन्सिपल ज्ञान बहादुर श्रेष्ठ ।
नेपाल आइडलः टप ३ प्रतिस्पर्धी निशान बुद्ध, र प्रतापले टुडिखेलमा धमाका मच्चाए (भिडियो)
१ असोज, काठमाडौँ । सर्वाधिक रुचाइएको नेपालको पहिलो साङ्गीतिक रियालिटी शो नेपाल आइडलका टप ३ का प्रतिस्पर्धीहरुले बिषेश कन्सर्टमा धमाका मच्चाएका छन् । शनिबार टुडिखेलमा सम्पन्न बिषेश कन्सर्टमा निशान, प्रताप र बुद्धले आफ्ना बिशेष प्रस्तुतिमार्फत दशौ हजार दर्शकलाई मनोरञ्जन गराएका हुन् । उक्त कन्सर्टमा दर्शकहरुले टुडिखेल खचाखच भरिएको थियो । टप ३ प्रतिस्पर्धीहरुले प्रस्तुती दिदाँ सुरक्षाकर्मीलाई समेत भिड थेग्न हम्मेहम्मे परेको थियो । तिनै जना प्रतिस्पर् ...
यिनै हुन् मतपत्र च्यात्ने माओवादी, प्रहरीले नियन्त्रण लिदै गरेको दृश्य हेर्नुहोस भिडियोमा...
१५ जेठ, काठमाडौं । भरतपुरमा मध्यरातमा मतपत्र च्यातियो । राति नै मतगणनास्थलमा झडप भयो र माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्याते ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफन्त अप्ठेरोमा परेका छन् ? यसरी दिनुहोस् ‘अनलाइन निवेदन’ (भिडियो)
काठमाडौं, वैशाख २९ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तपाईंका आफन्त अप्ठेरोमा परेका छन् ? हराएका छन् वा उद्धार गर्नु छ भने तपाईंले अनलाइनबाटै सरकारको सहयोग लिन सक्नु हुन्छ । यसका लागि तपाईंले कन्सुलर सेवा विभागको वाइवसाइटमा रहेको फर्म भर्नुपर्नेछ । अनलाइनबाटै तपाईंले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ । त्यसैको आधार ...
मत बदर हुन नदिन निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्यो यस्तो भिडियो
२० बैशाख, काठमाडौं । निर्वाचनमा एउटा भोटको पनि धेरै महत्व हुन्छ । एउटा भोटले आफूले रोजेको योग्य उम्मेदवारको हारजितको छिनोफानो गर्छ । त्यसैले मतदान गर्दा राम्रोसँग होस पुरयाइएन भने आफैलाई पछुतो हुन्छ । १९ वर्ष पछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । १९ वर्ष अघि जन्मिएका व्यक्ति अहिले योग्य मतदाता भएका छन् । उनीहरुलाई स्थानीय तहमा मतदानको अनुभव नै छैन । अनि अहिले हुन गइरहेको निर्वाचन यसअघिको भन्दा निक्कै फरक छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पहिलो पटक स्थानी ...
हे भगवान बजारमा (भिडियो)
१६ बैशाख, काठमाडौँ । लोक गायक गायक रामजी खाँण र बिष्णु माझीको आवाजमा “हे भगवान” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । एकनारायण भण्डारीको उत्कृष्ट शब्द र संगीतमा रहेको छ ।मोडल महेन्द्र गौतम र रन्जिता गुरुङले अभिनय गरेका छन् । सीतारा म्यूजिक प्रा लिको प्रस्तुतीमा गीत बजारमा आएको हो । ...
काठमाडौं, वैशाख १३ – पछिल्लो समय युट्युबको महत्व बढ्दै गएको छ । अहिले युट्युब गीत र सिनेमालाई कतिले मन पराए कतिले पराएनन् भन्ने कुरा मापन गर्ने यन्त्र जस्तै बनेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा युट्युबको प्रभाव र प्रयोग राम्रैसँग भएको छ । पहिले मुश्किलले कुनै नेपाली गीतले लाख दर्शक पाउँथ्यो भने अहिले लाख पटक हेरिनु सामान्य बनेको छ । अहिले त केही गीत करोड पटक पनि हेरिएका छन् । आज हामीले युट्युबमा करोड भन्दा धेरै पटक हेरिएका पाँच गीतका बारेमा एक साम ...
एमालेको चुनावी गीतः “सही पनि एमाले, मै पनि एमाले” युट्युब ट्रेन्डिङको नम्बर १ मा (भिडियोसहित)
काठमाडौं – चर्चित लोकगायक बद्रि पंगेनीले अगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई मत दिन आब्हान गर्दै गाएको गीत सार्वजनिक गरेका छन् । “सही पनि एमाले, मै पनि एमाले” शीर्षकको गीतमा उनलाई गायिका प्रिया भण्डारीले साथ दिएकी छिन् । यसमा इएनबीको शब्द–संगीत र अनुप सिवाकोटीको सम्पादन रहेको छ ।उक्त गीतलाई बरदान डिजिटलले बजारमा ल्याएको छ । देश बिकास गर्न एमालेले लिएका नीति कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै तीनको कार्यान्वयनका लागि एमालेको सरकार बनाउन ...
सिनेमा ‘लुट–२’ को मेकिङ भिडियो सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं, वैशाख १२ – निश्चल बस्नेतको निर्देशनमा बनेको सिनेमा ‘लुट–२’ को मेकिङ भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सिनेमा सुटिङको समयमा निर्देशकले कलाकारहरुलाई दिएको निर्देशनलाई यस भिडियोमा देख्न सकिन्छ । २ मिनेट ३५ सेकेण्ड लामो यस भिडियोलाई सिनेमा ‘मेकिङ पार्ट वान’को नामले ‘ब्ल्याक हर्ष पिक्चर्स’ले आफ्नो युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक गरेको छ । यस हिसावले सिनेमा मेकिङका अन्य भिडियोहरुलाई पनि हामीले देख्न पाउने छौ ...
बनेपा, वैशाख ११ । जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थकी आमा मिरा छोरो उठेर ‘गुड मर्निङ मामु’ भन्ने आसमा हरेक बिहान एकतमासले हेर्छिन्। उनले मुकेशलाई यसरी हेर्न थालेको ११ वर्ष बितिसक्यो। मुकेशजस्ता दुई दर्जनभन्दा बढी युवायुवतीले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लािग ज्यान दिए। कोही अशक्त बने, कोही जीवन–मरणसँग संघर्ष गर्दागर्दै धर्तीबाट अस्ताए, कोही जीवन–मरणकै संघर्षमा छन्। यो खबर आजको राजधानीमा केशवराज पौडेलले लेखेका छन्। बन ...
मैदानमा रगताम्मे बनेका मेस्सीको नयाँ किर्तिमान ( हेर्नुहोस् भिडियो)
म्याड्रिड, वैशाख ११ – एकपछि अर्को किर्तिमान तोड्दै नयाँ बनाउँदै आएका लियोनेल मेस्सीले फेरि अर्को किर्तिमान आफ्नो नाममा लेखेका छन् । आइतबार राती दुई गोल गर्दै ला लिगाको क्लासिकोमा सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका छन् । अल्फ्रेडो डि स्टेफानोको १४ गोलको किर्तिमानलाई पछि पार्दै उनले यो किर्तिमान बनाएका हुन् । सबै क्लासिकोहरुमा भने उनको गोलसंख्या २३ पुगेको छ । १९ वर्षको उमेरमा उनले सन् २००७ मा क्लासिकोमा पहिलो गोल गरेका थिए । खेलमा मार्सेलोसँग जुधेपछि रग ...
जोन सिना र प्रेमिकाले युट्युबका लागि यसरी उतारे कपडा, हेर्नुहोस् भिडियो
बैशाख ९ – अमेरिकाका चर्चित रेसलर र डब्लूडब्लूईका सुपरस्टार जोन सिना र उनकी प्रेमिका निकी बेलाले युट्युबका लागि कपडा उतारेका छन् र यसको भिडियो युट्युबमा पोष्ट पनि गरेका छन् । यो जोडीले आफ्ना प्रशंसकलाई यदि ‘द बेला ट्विन्स’ को पेजमा ५ लाख सब्सक्राइबर्स भए उनीहरुले क्यामराको अगाडि स्ट्रिप डाउन गर्ने बताएका थिए । यसका लागि जोन सिनाका प्रशंसकले चाँडै नै यो जोडीलाई उनीहरुको उद्देश्यसम्म पुर्याउन सहयोग गरे । त्यसपछि जोन सिना र उनकी प्र ...
हेर्नुहोस् कुरुप पुरुषको कमेडी (भिडियोसहित)
८ बैशाख । गडफ्रे बगुमालाई युगान्डाको सबैभन्दा कुरुप मानिसको रुपमा लिइन्छ । मानिसहरु उनलाई हेर्न तथा उनको नजिक जान पनि मन पराउँदैनथे । उनको कुरुपताले नै होला सन् २००२ मा भएको उनको पहिलो विवाह टिकेन र उनकी पत्नीले उनलाई छाडिन् । छाडेर जाने बेलामा स्वास्नीले भनेकी थिइन्स् तिमी निकै डरलाग्दो देखिन्छौ, तिमीसँग म बस्न सक्दिन । एक खतरनाक जन्मजात रोगबाट पीडित बगुमाले २००८ मा अर्को बिहे गरे, जुन अहिलेसम्म टिकिरहेको छ । उनी निकै खुसी छन् । उनी अहिलेसम्म ८ ...
संसारको जुनसुकै स्थानमा पुगेर वास्तविक दृष्य हेर्न पाइने तर कसरी ? हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौं, वैशाख ७ । गुगल भर्चुअल रियालिटी (भीआर) मा अब तपाइँलाई स्वागत छ १ अब भीआर थ्रीडी हेडसेटको सहायताले संसारको कुनैपनि स्थानमा निःशुल्क यात्रा गर्न पाउनुहुनेछ । तपाइँ संसारको जुनसुकै स्थानमा उडेर जान सक्नुहुनेछ र त्यहाँको वास्तविक दृष्यको अनुभव गर्न पाउनुहुनेछ । तपाइँको आफ्नै मस्तिकलेसमेत बिर्सने छ कि तपाइँ आफ्नै घरको कोठामा बसिरहनुभएको छ । गुगल अर्थले गुगल भर्चुअल रियालिटीको सुरुआत यसअघि नै गरेको हो । त्यतिखेर तपाइँ पृथ्वीको निश्चित ठाँउहरु ...
श्रीलंकाको राजकीय भ्रमणमा भारतिय प्रम राजीव गान्धीलाई सलामी दिने सैनिकले चुटेको दुर्लभ भिडियो
६ बैशाख, काठमाडौं । सन् १९८७ मा मा नेपाललाई जस्तै श्रीलंकालाई भारतले हेप्दा राजकीय भ्रमणमा रहेका तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री राजिभ गान्धीलाई राजकीय सम्मान गर्ने सिपाहीले नै बन्दुकले यसरी चुटेका थिए । हेर्नुहोस उक्त दुर्लभ भिडियो: ...
गायक मनोजराज लाई आफ्नी प्रेमिकाले धोका दिएपछि...(भिडियोसहित)
४ बैशाख, काठमाण्डौ । नेपाली गायनक्षेत्रमा जम्दै गरेका गायक मनोजराजको निकै नै हृदयस्पर्षी एवम् मार्मिक गीत सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सञ्जाल युट्युबमार्फत उक्त भिडियो गीत रिलिज गरिएको हो । उक्त गीतमा शब्द संगीत क्रमशः केशवराज रसाइली र डि वी लामाको रहेको छ । यस गीतलाई पुस्कर सुनुवारले एरेन्ज गरेका छन् । छुटेपछि थाहा भयो माया कति गाढा हुदो रैछ बोलको यस गीतमा स्वर गायक मनोजराजकै रहेको छ भने निर्देशन बाबु जिम्बाको रहेको छ । गीतलाई विजयराजले सम्पादन गर ...
टोले गुण्डाहरुद्धारा यूवतीलाई सामुहिक धेरा हाल्ने प्रयास(भिडियो सहित)
१ बैशाख, काठमाडौँ – बाटोमा हिडिरहेकी एक यूवतीलाई केही टोले गुण्डाहरुले सामुहिक धेरा हाल्ने प्रयास गरेका छन । यूवतीको रुपमा लठ्ठ परेर टोले डनहरुले त्यस्तो हर्कत गरेको बुझिएको छ र सो घटनाको यतिखेर टोलटोलमा हल्ला चलिरहेको छ । यो दृश्य भने रियल लाइफमा नभई गायक राजकुमार देवकोटाका वहुप्रतिक्षित गित टोलटोलमा हल्ला चल्यो भिडियोमा देख्न सकिन्छ । केही समय अगाडिनै टोलटोलमा हल्ला चल्यो गितको अडियो श्रोताले सुनेपनि सो गितको भिडियो कस्तो बन्ना भन्ने सबैम ...
स्वास्थ्य क्षेत्रमा २०७३ साल कस्तो रह्यो ?
काठमाडौं, चैत ३१ । गएको वर्ष सिङ्गो मुलुकले विद्युत् कटौतीको विकराल समस्याबाट मुक्ति पाए जस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि विभिन्न सुधारात्मकहरु कदमहरु चालिएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पदबहाली गरेको भदौ १२ गतेदेखि नै हरेक दिन कुनै न कुनै जनस्वास्थ्यका मुद्दाले सञ्चारमाध्यममा चर्चा पाइरहेका छन् । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक पुर्‍याई जनतालाई आफ्नै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले १९८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ...
काठमाडौँ । कपन, हेण्डबलसंगै रहेको पायोनिय पब्लिक स्कुलले १९औँ बार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस सम्पन्न गरेको छ । शनिबार आफ्नै प्रांगनमा गरिएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको थियो भने कार्यक्रममा अभिभावको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । स्कुलका प्रिन्सिपलहरु तथा समाजका विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा गायक दिपक लिम्बु, लोक गायक राजन ठकुरीले आफ्ना गीतहरुबाट उपस्थित व ...
क्रिकेटबाट सन्यास लिएपछि सचिनको रेकर्ड, पहिलो गित नै सुपरहिट (भिडियो)
२५ चैत, एजेन्सी । क्रिकेटको क्षेत्रमा सचिन तेन्दुल्करलाई व्याट्स्म्यानका ‘लिटल मास्टर’ भनेर पनि चिनिन्छन् । साथै उनी रेकर्ड बनाउने भन्दा बढि तिनै रेकर्डलाई तोड्ने व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन् । हरेक रेकर्ड तोडेर चर्चाको शिखरमा रहने तेन्दुल्कर यतिखेर भने गित गाएर चर्चामा आएका छन् । क्रिकेटबाट सन्यास लिइसकेका ४३ वर्षीय सचिनले हालै एक गित रेकर्ड गरेका छन् । भारत र क्रिकेटविचको प्रेम झल्काउदै गायक सोनु निगमसंगको सहकार्यमा उनले ‘न ...
ट्रम्पको अनौठो व्यवहारले सबै चकित
१७ चैत, एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एक भिडियो क्लिप अहिले ट्विटरमा भाइरल बनेको छ । ह्वाइट हाउसको टेबलमा विभिन्न छलफलको समयमा ट्रम्प टेबलमा भएका वस्तुहरु पटक पटक यताउता सारिरहेको क्लिपमा देख्न सकिन्छ । राष्ट्रपति पदमा आसिन व्यक्तिको यस्तो अनौठो व्यवहार देखेर ट्रम्पलाई ओसिडी (अब्सेसिब कम्पल्सिभ डिसअर्डर) भएको आशंका समेत अन्तराष्ट्रिय मिडियाले लेख्न भ्याएका छन्। ओसिडी एक मानसिक अवस्था हो जसमा व्यक्तिले वस्तुहरु पटक पटक चेकजा ...
लौ आयो -एक चोट लिई गयौ तिमी- गितको भिडियो ( भिडियो हेर्नुहोस् )
११ चैत । प्रतिभावान यूवा गायक योगेश लामगादेको आवाजमा सजिएको -एक चोट लिई गयौ तिमी- गितको म्यूजिक भिडीयो सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो समयका आशलाग्दा गितकार रमेश संङ्गरागले कोरेका मनछुने शब्दमा यूवा संगितकार सरोज पोख्रेलको भाव सुहाउदो संगितले गित कालजयी बनेको छ । यस अघी पनी केही गितहरुमा आवाज दिईसकेका गायक योगेशको औपचारीक रुपमा बजारमा आएको यो पहिलो म्यूजिक भिडीयो हो । सुमन के। सी। को संगित संयोजन रहेको यो गित गितकार रमेशको ‘संङ्गराग’ एल्वम ...
११ चैत । प्रतिभावान यूवा गायक योगेश लामगादेको आवाजमा सजिएको एक चोट लिई गयौ तिमी गितको म्यूजिक भिडीयो सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो समयका आशलाग्दा गितकार रमेश संङ्गरागले कोरेका मनछुने शब्दमा यूवा संगितकार सरोज पोख्रेलको भाव सुहाउदो संगितले गित कालजयी बनेको छ । यस अघी पनी केही गितहरुमा आवाज दिईसकेका गायक योगेशको औपचारीक रुपमा बजारमा आएको यो पहिलो म्यूजिक भिडीयो हो । सुमन के। सी। को संगित संयोजन रहेको यो गित गितकार रमेशको ‘संङ्गराग’ एल्वममा ...
माउन्टेन टेलिभिजन लाइभमा मन्त्रीले पत्रकारको झाँको झारेपछि...( अन्तर्वार्तासहित )
३ चैत, काठमाडौ । वाणिज्य मन्त्री रोमी गौचन थकालीले माउन्टेन टेलिभिजनलाई दिएको एउटा अन्तरवार्ता अहिले चर्चामा छ । ४३ मिनेट लामो उक्त लाइभ अन्तरवार्ताभरि मन्त्री थकालीले पत्रकारको सातो खाएका छन् । ‘तपाईंले त मन्त्रालयमा तहल्का पिट्नुभएको छ रे नी ?’ पत्रकारको पहिलो प्रश्न थियो । ‘कुन अर्थमा ?’ मन्त्री थकालीले जिज्ञासु भएर सोधे ।पत्रकार सुनिल दाहालले ‘माउन्टेन फोकस’ कार्यक्रमको सुरुवातमा मन्त्रीमाथि केही व्यक्तिगत ...
टाउकोले सिँढी चढेर अनौठो कीर्तिमान हेर्नुहोस् भिडियो
कतिपय मानिसको क्षमता पनि सामान्य मान्छेले आँट्नै नसक्ने खालको हुन्छ । अग्लो सिँढी भयो भने खुट्टैले टेकेर चढ्दा त थकाइ लाग्छ तर यी व्यक्तिले भने खुट्टाले होइन टाउकैले टेकेर सिँढी उक्लिन्छन् । उनको यो कला तथा क्षमता जन्मजात होइन, उनले कैयन् वर्षको तालीम तथा मेहेनतपछि प्राप्त गरेका हुन् । निरन्तरको अथक मेहेनतपछि उनले अहिले अनौठो क्षमता हासिल गरेका छन् ।चीनको बेइजिंगका ली लङगङ्ग नामका व्यक्ति सजिलैसँग टाउकोले सिँढी चढ्दछन् । उनको यस्तो चढाइ देख्दा ह ...
गृहमन्त्रीद्वारा सप्तरी र कञ्चनपुर घटनाको बारेमा संसदलाई जानकारी (LIVE)
काठमाडौं, फागुन २७ - उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले फागुन २३ गते सप्तरीको राजविराज घटना र २६ गते कन्चनपुरको घटनाबारे संसदलाई जानकारी दिएका छन्। यस्तै जाजरकोटको बस दुर्घटनाका बारेमा पनि संसदमा जानकारी गराएका छन्। कञ्चनपुर र सप्तरी घटनाका विषयमा आज संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्र ...
Yatra l Sound Wingz l Official Music Video l Nepali Song l Feat.Ishu Thapa & Nabin Lamsal
लोकप्रिय बन्दैछ अनौठो कुकुर बसयात्रा (भिडियो सहित)
दुनियाँमा केवल मानिसलाई मात्र बोक्ने सार्वजनिक सवारी साधन छैनन् । यस्ता बसहरु पनि छन् जसले मानिस होइन कुकुरलाई बोकेर सहर डुलाउँछन् । हो, बेलायतको लण्डनमा गत जनवरी १७ देखि कुकुरका लागि विशेष बसयात्रा सुरु गरिएको छ । मेल अनलाइनको खबरअनुसार उक्त कुकुर बसयात्राको नाम के नाइन हो । यो बस यात्राको माध्यमबाट कुकुर मालिकले आफ्नो कुकुरसँग समय बिताउने नयाँ अनुभव हासिल गर्न सक्नेछन् । अझ रोचक कुरा त के भने यो बसयात्रा पूर्णरुपमा निशुल्क छ । यो बसयात्राका दौर ...
हिमालय एयरलाइन्सले ल्यायो नयाँ विमान ( हेर्नुहोस् भिडियो )
१८ माघ, काठमाडौं । हिमालय एयरलाइन्सले नयाँ विमान भित्र्याएको छ । निजी क्षेत्रबाट अन्तराष्ट्रिय उडान गरिरहेको हिमालय एयरलाइन्सले मंगलबार नयाँ विमान ल्याएको हो । विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुग्दा पानीको फोहोरासहित स्वागत गरिएको थियो । नयाँ विमानमा १५८ सिट रहेको एयरलाइन्सले जनाएको छ । यससँगै कम्पनीसँग दुई विमान भएको छ । ...
विद्यार्थीको चौतर्फि विकासका लागि टेक्सस स्पोर्टस मिट सुरु (भिडियो)
२५ पुस । काठमाडौँको चाबहिल मित्रपार्कमा रहेको टेक्सस इन्टरनेशनल कलेजले स्पोर्टस मिट सञ्चालन गरि रहेको छ । हरेक बर्ष आयोजना हुने उक्त प्रतियोगितात्मक आयोजना यहि पुस २४ गतेबाट सुरु भएको छ र पुस २९ गतेसम्म चल्ने भएको छ । विद्यार्थीलाई खेलकुदको माध्यमबाट चौतर्फि विकासका गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको उक्त आयोजनामा म्याराथोन, क्रिकेट, बास्केटकल, फुटसल, भलिबल, टेबलटेनिस, ब्याडमिन्टन आदी खेलहरु हुनेछन् ।हामीले भन्दै आएका छौँ हाम्रो प्रमुख उद्देश्य ...
सूचना टाँसेर संसद बैठक भोलीसम्मका लागि स्थगित
काठमाडौं, पुस १८ । व्यवस्थापिका संसदको बैठक सूचना टाँसेर मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सोमबार बसेको बैठक विपक्षी दलले अवरोध गरेपछि ४ बजे बस्ने गरेर स्थगित भएको थियो । तर यो समयमा सहमति जुटाउन कुनै छलफल नभएकाले सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले सूचना टाँसेर बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्का लाग ...
प्रधानमन्त्रीद्धारा आज चन्द्रागिरी केबलकारको उद्घाटन (भिडियो)
३० मंसिर, काठमाडौँ । आन्तरीक पर्यटनका लागि पछील्लो आकर्षणको केन्द्र बनेको छ चन्द्रागिरी केबलकार । चन्द्रागिरी थानकोटमा रहेको उक्त केबलकार केहि महिना अगाडी देखि सञ्चालन हुदै आएको छ । भालेश्वर महादेवको दर्शन गर्न र केबलकारको मज्जा लिन सधै झै भिडभाड हुने चन्द्रागिरी आज भने फरक खालको भिडभाड रह्यो कारण हो केही महिना अगाडी देखि सञ्चालनमा रहे पछी औपचारिक उद्घाटान भएको थिएन र आज प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल “प्रचण्ड” को प्रमुख आतिथ्यता ...
सन् २०१६ का युट्युबमा सबैभन्दा लोकप्रिय १० भिडियोहरु (भिडियो सहित)
कुन भिडियोले समग्र इन्टरनेटको दुनियामा सबैलाई पछारेर सर्वाधिक लोकप्रिय बनिरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ । यद्यपि भिडियो स्ट्रिमिंग साइट युट्युबमा कति पटक भिडियो हेरियो भन्ने तथ्यांक भिडियोको लोकप्रियतामा एउटा मानक अवश्य बन्दछ । यसै सिलसिलामा यु ट्युबले यो वर्ष सन् २०१६ का टपटेन भिडियोको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । भ्यूज, शेयर्स, कमेन्टस् तथा लाइक्स लगायतको आधारमा उसले टपटेन भिडियोको सूचि तयार पारेको हो । युट्युबका अनुसार यी १० वटा भिडि ...
बिचित्रको सोखः आफ्नै शरिरलाई अंगभंग गर्दै यसरी बनाएका छन् मानव निर्मित टाटु (भिडियो सहित)
मान्छेको शोख पनि अनेक थरिको हुन्छ । सामान्य टाटु त प्राय सबैजसोलेनै खोपेका हुन्छन् । गर गहना लगएर आकर्षक हुनका लागि शरीरका केहि भाग हरुपनि प्रायले खोपेका हुन्छन् तर यहाँ भने शरीरलाइ र अनुहारलाइनै पुरै मोडिफाई गरिएको छ । अचम्म नमान्नु होला यो वास्तविक जिबनमा गरिएको मानब निर्मित टाटु तल भिडियोमा छ, हेर्नुहोस्ः- ...
शिवलाई कोमल वलीको अन्तिम चेतावनी (भिडियो)
७ साउन, काठमाडौँ । भगवान शिवलाई अन्तिम चेतावनी दिदैँ सञ्चारकर्मि तथा गायिका कोमल वलीले नयाँ तिज गित "लास्टै चोटी हो" बजारमा लिएर आएकि छिन् । हरेक वर्ष तीज अवसरमा एउटा गित ल्याउने गायिका ओलीले यसपालि पनि लिएर आएकि छिन् । गितमा कोमल वली र पशुपती शर्माको स्वर तथा अभिनय रहेको छ । शब्द पशुपती शर्माको नै रहेको छ । ...
काठमाडौँको आर. एन. एसी. देखि दरबारमार्गसम्म जे देखियो ( भिडियो )
काठमाडौँ । काठमाडौँको ब्यस्त सडक मध्यको एक हो आरएनएसी । जहा धेरै सवारी साधन तथा मान्छेहरुको बाक्लो भिडभाड हुन्छ । आर. एन. एसी. देखि दरबारमार्गसम्म ktmkhabar.com ले भिडियो यात्रा गरेको छ । प्रस्तुत छ सो भिडियो यात्राः- ...
तेक्वान्दोमा रमाउदै विद्यार्थीहरु (भिडियो)
२ साउन, काठमाडौँ । विद्यालयहरुले अहिले विद्यार्थीहरुको कसरतमा ध्यान दिदै बिभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा जोड दिइरहेको पाइन्छ । जसमा एक हो तेक्वान्दो । यस्तै अहिले बौद्धमा रहेको सामुदायिक स्कुल महेन्द्र बौद्ध स्कुलले विद्यार्थीहरुकोे कसरतलाई मध्यनजर गर्दै हरेक दिन स्कुल छुट्टि भए पश्चात अर्थात ४ बजे पछि तेक्वान्दो खेलको माध्यमबाट विद्यार्थीहरुलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिइरहेको छ । विद्यार्थीहरुको यो मोहलाई देखेर तेक्वान्दोलाई हामिले जोड दिएक ...
भीषण बाढीमा बगेकी यी महिला,जसको उद्धार यसरी गरियो (भिडियो)
दक्षिण चीनको एक नदीमा भीषण बाढी आएपछि सो बाढीमा एक महिला बग्न पुगिन् । उनले सो भीषण बाढीमा एक बाँस वा काठको सहारामा चार घण्टासम्म करिब ६० किलोमिटर संघर्ष गरेर तिब्र दौडिरहिन् । भाग्यवस उनलाई उदारकर्ताहरुको एक कुशल टोलीले उदार गर्न सफल भएको छ । चीन प्रतिष्ठित समाचार संस्था सिन्हवा न्युज एजेन्सीले प्रसारण गरेको सो भिडियो अहिले संसारभर भाइरल भएको छ । हेरौ सो कारुणिक भिडियो । ...
अरबिन्द्रको घर घरमा ग्याँस पाइप
३१ असार, काठमाडौँ । अरबिन्द्र भट्टराईले अहिले ब्याङ्यात्मक नेपाली तिज गित घर घरमा ग्याँस पाइप लिएर आएका छन् । गितमा अरबिन्द्र भट्टराई र तुलसी घर्ती मगरको स्वर रहेको छ । शब्द, संगित अरबिन्द्र कै रहेको छ भने चिरञ्जिवी सापकोटाले सो गितको म्युजिक भिडियोलाई निर्देशन गरेका छन् । गितमा अरबिन्द्र, शुशिला (बिमली), चिरञ्जिवी, शुशिलको अभिनय गरेका छन् । ...
नेपालमा पहिलो पटक १ मिनेटको साइलेन्स मुभि तयार भयो (भिडियो)
३१ असार, काठमाडौँ । स्वदेश तथा बिदेशमा होस् अहिले नेपाली सर्ट मुभिको ह्वात्तै क्रेज बढेको देखिन्छ । धेरै बिषयबस्तुमा तयार भएको नेपाली सर्ट फिल्महरु अहिले हामीले युुटुबमा हेर्न पनि सक्छौ । यस्तै अहिले नेपालमा पहिलो पटक १ मिनेटको साइलेन्स मुभि 'लभ इज लाइफ' तयार भएको छ । जहा एक मिनेट १९ सेकेण्डसम्म कुनै सम्बाद बिनै पुर्णरुपमा कथा बन्छ । ट्रिक मिडियाद्धारा तयार भएको फिल्म बिहिबार हाइलाइट्स नेपालको युटुबबाट रिलिज गरिएको छ । सो फिल्ममा श्याम कार्की, आ ...
१४ असार, काठमाडौँ । बुढानीलकण्ठ क्षेत्र बिकास समिति अन्तर्गत अध्यनरत बिद्यार्थीहरुले बुढानीलकण्ठ मन्दिरको प्रांगनणमा सोमबार बेलुका प्राथणा गर्दै गर्दा केटियमखबर डट कमबाट खिचिएको भिडियो अंश:- ...
चपली हाइट २ को टिजर सार्वजनीक
९ असार, काठमाडौँ । भदौ २ को रिलीज समय तोक्दै नेपाली चलचित्र ‘चपली हाइट २’को टिजर रिलिज गरिएको छ । उक्त चलचित्र अर्जुन कुमारको निर्माण र दीपेन्द्र के खनालको निर्देशनमा तयार भएको छ । केहि दिनमा नै ट्रेलर रिलिज गर्ने भन्दै निर्माणपक्षले टिजर रिलिज गरेको हो । टिजरमा चलचित्रका कुनै पनि पात्र छैनन् । तर, यसको टिजरले धेरै कुराको अर्थ राख्छ । ‘चपली हाइट मार्ग’तर्फ लागेका २ कारलाई देखाउँदै टिजर तयार पारिएको छ । चपली हाइट मार्गमा ह ...
यसरी बन्छ चूल्होमा प्रयोग हुने ग्यास सिलिन्डर (भिडियो सहित)
काठमाडौँ - पछिल्लो समयमा नेपालमा ग्यास सिलिन्डर पड्केर वा आगलागी भएर हुने दुर्घटनाका खबरहरु बारम्बार बाहिर आइरहेका छन् ।चूल्होमा प्रयोग हुने ग्यास सिलिन्डरको मापदण्ड र यसको उपयोगका बारेमा नजान्दा पनी दुर्घटनाहरु भैरहेका हुन्छन् ।ग्यास सिलिन्डर कसरी निर्माण भएको हुन्छ त ? यो बारेमा एलपी ग्यास सिलन्डिर निर्माणको भिडियोलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ । ...
केकेले अनुलाई ‘डु यु लव मि’ भनेपछि (भिडियो सहित)
पछील्लो पटक म्युजिक भिडियोमा ब्यस्त भईरहेका मोडल केके अधिकारीको नयाँ म्युजिक भिडियो “डु यु लभ मी” सार्वजनिक भएको छ । केही फरक गेट अपमा देखिएका केकेको यो भिडियोमा २ वटा रुप देख्न सकिन्छ । गायक ओम प्रसाईको आवाजमा रहेको ‘डु यु लव मि’ बोलको गित बजारमा ल्याएका हुन् जसलाई शंकर अधिकारीले निर्देशन गरेका छन् । सो म्युजिक भिडियोमा केके र अनुको अभिनय रहेको छ भने छायांकन र सम्पादन गायक ओम प्रसाइ कै रहेको छ । गायक प्रसाई भन्छन य ...
‘प्रेमगीत’ हेर्नुभयो त ?, अब हेर्नुहोस् युट्युबमा (भिडियो सहित)
गत बर्ष दर्शकको मन जित्न सफल फिल्म ‘प्रेमगीत’ युट्युबमा आएको छ । उक्त फिल्म नेपाल रिलिजसँगै विदेश प्रदर्शनको क्रममा पाईरेसीको मारमा परेको थियो । अन्ततः ‘प्रेमगीत’ अफिसियल रुपमै युट्युवमा आएको छ । भिसिडी तथा ईन्टरनेट प्रदर्शनको अधिकार लिएको कम्पनि ओएसआर डिजिटलले ‘प्रेमगीत’ लाई विश्वव्यापी रुपमा ईन्टरनेट रिलिज गरेको हो । पाईरेसीको कारण फिल्म यसअघि नै बाहिरिए पनि युट्युवमा समेत फिल्मले दर्शकको मन जित्ने ओएसआरका त ...
यस्तो भनेका थिए नयाँ शक्ति नेपाल घोषणामा भट्टराईले (भिडियो सहित)
३ असार - काठमाडौँ । पूर्व एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले गत आइतबार दशरथ रंगशालामा आयोजित सभामा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीको औपचारिक घोषणा गरेका थिए । यसअघि नयाँ शक्ति अभियान नाम दिइएको उक्त पार्टीका संयोजक रहेका भट्टराईले घोषणा सभामा पार्टीका सदस्यहरुलाई सामूहिक सपथ ग्रहण पनि गराए ।घोषणा सभामा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु, कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, भारतीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी भएका थिए । ...
लालबाबु पण्डित भन्छन् काला र गोरामा अहिले पनी विभेद छ जस्तो लाग्छ
२९ जेठ, काठमाडौँ । काठमाडौँको नयाबानेश्वर स्थित मसला कटेजमा गायक रामकृष्ण श्रेष्ठको तेश्रो एल्बम बयलीको सार्वजनीक गरियो । पुर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको प्रमुख आतिथ्यततामा गत शनिबार एक कार्यक्रमका बिच सो एल्बमको विमोचन गरिएको हो । कार्यक्रममा बरिष्ठ गायक एवम् संगीतकार रामेश श्रेष्ठ, वरिष्ठ चिकित्सक एंव गीतकार डा. भोला रिजाल, गायिका रेखा शाह, गायक तथा नायक यश कुमार र गायक तथा संगीतकार सुरेन्द्र श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा विमोचन ...
+2 मा कस्ता कलेज छान्ने?: न्यु मिलीनियम कलेजका क्याम्पस प्रमुख कमल सापकोटासंग गरिएको कुराकानी
काठमाडौँ — एस एल सीलाई नेपाली समाजमा आइरन गेटको रुपमा चिनिन्छ हाम्रो समाजमा तसर्थ एस एल सी पास गरिसकेपछी प्लस टु पढ्दा बिद्यार्थीले छनोट गर्ने बिषयले उसको भविष्यलाई निर्धारण गर्दछ तसर्थ प्लस टुमा बिषय छनोट गर्दा आफ्नो रुची, क्षमता लगायतका यावत कुराहरुलाई ध्यान दिन जरुरि छ । यि सबै कुराहरु भइरहदा पनी आम बिद्यार्थी तथा अभिभावकहरुमा कसरी सहि बिषय र कलेज छान्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै दोधार भएको देखिन्छ । अभिभावको दवाव र इच्छामा बिषय छनोट गर्दा बिद ...
बिक्कीले लिएर आए मैना
१९ जेठ, काठमाडौँ । २०६० साल देखि सांगीतिक क्षेत्रमा प्रबेश गरेका गायक बिक्की श्रेष्ठले धेरै गीतहरु बजारमा ल्याइसकेका छन् । उनको आवाजमा एक दर्जन भन्दा बढी गीत बजारमा आइसकेका छन् र अहिले उनै गायक बिक्कीको नया गित मैना बजारमा आएको छ । गीतमा गायक बिक्की श्रेष्ठको आवाज रहेको छ भने संगीत सुरज श्रेष्ठ र शब्द कुन्दन थापाको रहेको छ । सो गीतको भिडियो केहि साता अघि मात्र युटुब मार्फत रिलिज गरिएको थियो । गीतलाइ प्रशन्न पौडेलले निर्देशन गरेका छन भने दृश्य कैद ...
अनन्तले शुप्रियालाई यो मुटुमा तिम्रै नाम छ भनेपछी
१९ जेठ, काठमाडौँ । एबी फिल्मीको प्रस्तुतीमा तयार गरिएको नेपाली आधुनीक गित यो मुटुमा तिम्रै नाम छ को रिलीज गरिएको छ । जसमा अनन्त अधिकारीको र शुप्रिया कटवालले अभिनय गरेका छन् भने सो गितमा शिशिर योगी र सुधा रत्न रुकुमको स्वर छ । म्युजिक सन्तोष श्रेष्ठको रहेको छ ।जसमा पछिल्ला पुस्ताको माया, प्रेमलाई झल्काउन खोजिएको छ र यो गितको राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ सो गितका निर्देशक गणेश सुवेदीले जानकारी गराउनु भयो । ...
अव +2 मा कस्ता कलेज छान्ने: टेक्सास कलेजका श्याम सुन्दर श्रेष्ठसंग गरिएको कुराकानी (भिडियो)
एस एल सीलाई नेपाली समाजमा आइरन गेटको रुपमा चिनिन्छ । एस एल सी पास गरिसकेपछी प्लस टु पढ्दा बिद्यार्थीले छनोट गर्ने बिषयले उसको भविष्यलाई निर्धारण गर्दछ तसर्थ प्लस टुमा बिषय छनोट गर्दा आफ्नो रुची, क्षमता लगायतका यावत कुराहरुलाई ध्यान दिन जरुरि छ । यि सबै कुराहरु भइरहदा पनी आम बिद्यार्थी तथा अभिभावकहरुमा कसरी सहि बिषय र कलेज छान्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै दोधार भएको देखिन्छ । अभिभावको दवाव र इच्छामा बिषय छनोट गर्दा बिद्यार्थीको इच्छा विपरित भएमा त्यसले ...
‘तीन घुम्ती’को ट्रेलर सार्वजनिक, यस्तो छ गरिमाको पावरफुल क्यारेक्टर
काठमाडौँ, १६ जेठ - चलचित्र ‘तीन घुम्ती’को काठमाण्डौमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी त्रको ट्रेलर र २ गीत रिलिज गरिएको छ । चलचित्रका मुख्य ३ कलाकार गरिमा पन्त, ध्रुव दत्त र सुशान्त कार्की ट्रेलरमा देखिएका छन् भने बाबुराम ढकालले निर्देशन गरेका छन् । ट्रेलरमा नायिका पन्तको क्यारेक्टर पावरफूल देखिएको छ । एक महिलाको २ पुरुषसँगको प्रेमलाई चलचित्रमा देखाइएको छ । साथमा प्रजातन्त्रका लागि गरिएको विद्रोह पनि ट्रेलरमा समावेश छ । स्वर्गिय साहित्यकार ...
बहुप्रतिक्षित चलचित्र छक्का पञ्जाको पहिलो गित सार्वजनिक
काठमाडौँ, १५ जेठ -आमा सरस्वती गिता देवी फिल्मको प्रस्तुतीमा तयार गरिएको बहु प्रतिष्ठित चलचित्र "छक्का पञ्जा"को पहिलो गित "पुर्व पश्चिम रेल" यूटूबबाट आज सार्वजनिक गरिएको छ । सो गितमा अञ्जु पन्त र राजन राज शिवकोटीको स्वर रहेको छ । राजन राज शिवाकोटिको संगीत भएको यो गीतमा संगीत संयोजन राजन इशानले गरेका छन । कविराज गहतराजको नृत्य निर्देशन रहेको गीतमा प्रियंका कार्की, दिपकराज गिरी, केदार घिमि, जितुु नेपाल, बुद्धिमान तामाङ्ग लगायत अन्य कलाकार ...
यस्तो छ सलमानको जुलाई ८ बाट रिलिज हुने ‘सुल्तान’ को ट्रेलर
बलिउड नायक सलमान खानको चलचित्र हेरेर रमाउने दर्शकका लागि खुसीको खबर छ । सलमानले अभिनय गरेको नयाँ चलचित्र ‘सुल्तान’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ३ मिनेट लामो ट्रेलर हेर्दा लाग्छ, यस चलचित्रलाई निर्देशकले सलमानको एक्सन र आँशुको मेल गराउने प्रयाश गरेका छन् । सुरुवातमै सलमानको आगमन विषेश लाग्छ । चलचित्रमा सलमान खान र नायिका अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिकामा छन् । यस चलचित्रमा सलमान सुल्तान बनेका छन् भने अनुश्का आरफाको भुमिकामा छन् । दुबैले पहल ...
जिस्मको टिजर सार्वजनिक, अर्चना पनेरुलाई निर्वस्त्र देखाइयो
राजु गिरीको निर्देशनमा अर्चनाको पहिलो फिल्म जिस्मको टिजर सार्वजनिक भएको छ । सो फिल्ममा यस चलचि मुख्य भूमिकामा अर्चना रहेकी छन भने नायकका रुपमा सुरेन्द्र बुढा रहेका छन । निकै नै हट दृश्य देखाइएको यो चलचित्र असार ३१ गते सम्पूर्ण हलहरुमा लाग्ने तयारी भएको निर्देशक राजु गिरीले बताएका छन । ...
रमेशले लिएर आए जे जे गर्छ जवानीले गर्छ
काठमाडौ, २ जेठ - रमेश गिरीको अर्को आशालाग्दो लोक दोहोरी गीत जे जे गर्छ जवानीले गर्छ बजारमा आएको छ । रक्षा म्युजिक मार्फत बजारमा आएको उक्त गितमा रमेश गिरी र प्रतिमा कार्कीले स्वर दिएका छन् । उक्त गीतमा रमेश गिरीकै शब्द, संगित रहेकोछ भने, बिनोद बाजुरालीले एरेन्ज गरेका छन् । पछिल्लो समय युट्युब तथा समाजिक सञ्जालमा राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको यो गितबाट गायक तथा संकलक गिरी एकदमै खुःसी छन् । ...
पबित्र मायाजाल अव बजारमा (भिडियो)
काठमाडौँ, बैसाख ३ — साथीभाई डिजिटल म्युजिक प्रालिले नया लोकदोहोरी गित पबित्र मायाजालको भिडियो सार्बजनिक गरेको छ । सो गितमा मुना थापा र भूमिराज माइलाको आवाज छ भने लय तेम्जिङ् पेम्बा लामा र आकाश ठिङ् लामाको छ भने शब्द प्रेम बिसी र चिनीमाया लामाको रहेको छ ।रामु विरहीका निर्देशनमा रहेको यो गीतमा छायांकन भने कारण चिसिरले दिनु भएको छ । ...
ज्योति मगरले आयुर्वेदिक औषधी खाएसी चट्टै भयो चट्टै
काठमाण्डौ, २६ चैत्र - लोकगित मार्फत आयुर्वेद्धिक औषधिको महत्वलाइ समेटेर तिर्सना म्युजिक प्रालीले लोक दोहोरी गित आयुर्वेदिक औषधी खाएसी चट्टै भयो चट्टै बोलको गित बजारमा ल्याएको छ । खुमन अधिकारी तथा ज्योति मगरको स्वरमा रहेको सो गितमा झलेन्द्र अधिकारीको शव्द तथा खुमन अधिकारी कै लयमा रहेको आयुर्वेदिक सम्बन्धीको गीत सन्देशमुलक तथा मनोरञ्जनात्मक देखिन्छ । बद्लिदो समय र व्यस्त जीवनका क्रममा मानिसहरुले धेरै रोग तथा स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपरेको वर्तमान पर ...
बिनयले लिएर आए दिलमा त अर्कैलाइ
काठमाण्डौँ, २३ चैत्र - लामो समय देखि नेपाली लोक संगीतमा अनवरत रुपमा लागीपरेका गायक हुन विनय खत्री । उनै लोक गाएक खत्रीको नयाँ एल्बम ‘दिलमा त अर्कैलाई’ बजारमा आएको छ । आधा दर्जन भन्दा बढी लोक गीतमा स्वर दिइसकेका विनयलाई यो गीतले अझै उचाइमा पुर्याउने आशा गरिएको छ । बिनयसँगै उक्त गीतमा विष्णु माझी, सुगम घर्तीको स्वर रहेको छ । उक्त एल्बममा नेत्र अर्यालको शब्द रहेको छ । ‘मायाँमा पागल’को सफलता पछी विनय खत्रीले यो एल्बम बजारमा ल ...
यस्तो छ रेखाद्धारा निर्मित चलचित्र "रामप्यारी" को नया ट्रेलर (भिडियो)
२४ फागुन, काठमाडौं । नायिका रेखा थापाले निर्माण गरेको चलचित्र ‘रामप्यारी’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । चैत्र २६ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने यो चलचित्रलाई सविर श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रको ट्रेलरमा नायिका रेखा थापाको एक्सन विशेष देखिएको छ । रेखा चलचित्रमा महिला ट्याम्पु ड्राइभरको भूमिकामा पनि छिन् । तर, ट्रेलरमा रेखाको एक्सन अवतारलाई विशेष जोड दिइएको छ । बाइक उडाउनेदेखि खलपात्रसँग भिड्ने कुरामा रेखा अगाडि देखिएकी छ ...
पल पल छाती चर्काउन.....
छेउँ नआउ करेन्ट लाग्ला...
नाचन कान्छि तिमी नाचन.....
नाच्ने हैन पशुपति शर्माको गीतमा
काठामाडौं । पञ्चेवाजामा गीत सुनेर मनोरञ्जन लिनेहरुका लागि पशुपति शर्माले एउटा कोशेली थपेका छन् । सम्झना लामिछाने मगरसँग मिलेर नयाँ गीत गाएका छन् पञ्चे बाजाको गीत ‘डल्ली’ । ‘यो कुनै मौलिक गीत होइन गाउँघरमा बजिरहने गीत हो ।’ कुरा गर्दै पशुपति शर्माले भने । ऐले नाच सबले मन पराउँछन्ब्या गरेछि बुढाले कराउँछन्यसै त डल्ली नाच हल्ली हल्ली… यस्तै यस्तै ठट्यौली शब्द छ यसमा । यहि भाकामा गाउँघरमा हुने बिहेमा केटाकेटीलाई न ...